သီချင်းတွေကိုဘယ်လိုပို့မလဲ (သို့) လက်ခံရရှိသူတွေကို WhatsApp ကနေသိမ်းဆည်းမလဲ အိုင်ဖုန်းသတင်း
ပါပလော Aparicio | | အိုင်ဖုန်းအက်ပ်များ, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
မနေ့ကကတည်းက WhatsApp မှစာရွက်စာတမ်းများကို PDF ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပဲပေးပို့နိုင်ပြီးထို format သို့ပြောင်းရန်လိုသည်။ ဤအသစ်အဆန်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Word၊ Excel၊ PowerPoint သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုပေးပို့နိုင်သည်။ ထိုမျှမကကျွန်ုပ်တို့သာမကသီချင်းများလည်းပေးပို့နိုင်သည်။ Native Music application ကိုအစဉ်အမြဲအသုံးပြုခဲ့ဖူးသောငါအနည်းဆုံးငါတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်မည်သို့သိလိုပါသလဲ WhatsApp တွင်ရရှိသောသီချင်းများကိုပေးပို့။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ? ကောင်းပြီဆက်ဖတ်ပါ
ပထမ ဦး ဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာသုတေသနအချို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသီချင်းများကို WhatsApp မှတစ်ဆင့်အချိန်အတော်ကြာပို့နိုင်သော်လည်းအခြားအပလီကေးရှင်းများနှင့်ပိုမိုစျေးကြီးတဲ့နည်းလမ်းများနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် third-party application များ အသုံးပြု၍ မည်သို့ပို့ရမည်ကိုသင်ကြားသွားမည်ဖြစ်သော်လည်းယခု ပို၍ လွယ်ကူလာပြီ။ ငါတို့သည်လည်းသင်မည်သို့ပြသသွားကြသည် သူတို့ကိုသင့် iPhone တွင်သိမ်းဆည်းပါ သင်လက်ခံရရှိသည့်ချက်တင်ကိုသင်ဖျက်ပစ်လျှင်ပင်၎င်းတို့ကိုပြန်ထုတ်ရန်။ သင့်တွင်အောက်ပါအချက်အလက်အားလုံးရှိသည်။
1 WhatsApp ကသီချင်းတွေကိုဘယ်လိုပို့မလဲ
1.1 လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူ (ပေးဆောင်)
1.2 စာရွက်စာတမ်းများ5(အခမဲ့) နှင့်အတူ
2 WhatsApp မှရရှိသောသီချင်းများကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း
ပေးပို့ သီချင်းများ .mp3 or m4a (ကျွန်ုပ်မကြိုးစားသေးသောအခြားပုံစံများ) သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးလိုအပ်သည်မှာအခမဲ့ VLC application ကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာအမျိုးအစားများကိုမျှဝေရန် site တစ်ခုပေါ်တွင်သီချင်းများထားရန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ application တစ်ခုရှိတယ်။ သင့်ရဲ့ ၀ ယ်ယူမှုကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းထောက်ခံလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည် Workflow အကြောင်းဖြစ်ပြီး Native Music application တွင်ရှိသည့်သီချင်းများကိုလည်းပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ Workflow ကို အသုံးပြု၍ WhatsApp မှသီချင်းများပေးပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ယုတ္တိနည်းအရကျွန်ုပ်တို့တွင် Workflow ကိုတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါက App Store သို့သွားပြီးထည့်သွင်းပါ။ သင်ကနေ download လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒီနည်းကို Link.
သီချင်းများကိုဂီတအက်ပလီကေးရှင်းမှထုတ်ယူပြီး၎င်းတို့ထံပို့ရန်လုပ်ငန်းအသွားအလာလိုအပ်သည်။ မင်းမှာရရှိနိုင်တဲ့တစ်ခုငါဖန်တီးခဲ့တယ် ဒီနည်းကို Link။ သငျသညျ Workflow ၌ဖွင့်ရန်ရှိသည်။
လုပ်ငန်းသုံးဆော့ဝဲလ်ကိုထည့်သွင်းပြီးလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည် Workflow ကိုဖွင့်ပြီး Send Music workflow ကိုစတင်သည်။
လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်ဤနည်းလမ်း၏နောက်ဆုံးအဆင့်မှာမျှဝေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား WhatsApp နှင့်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်သီချင်းများကိုပေးပို့ရန်ခွင့်ပြုပေးသည်။
စာရွက်စာတမ်းများ5(အခမဲ့) နှင့်အတူ
ယခင်ကကဲ့သို့ရိုးရှင်းသော်လည်းပိုမိုလွယ်ကူနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အခမဲ့ဖြစ်သောကြောင့် Documents5application ကို အသုံးပြု၍ သီချင်းများကိုပေးပို့သည်။ ဤနည်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအောက်ပါတို့ကိုသာလုပ်ဆောင်ရမည် -
စာရွက်စာတမ်း ၅ ကိုကျွန်ုပ်တွင်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါကကူးယူပါလိမ့်မည်။download,).
iPod Music Library ကိုဖွင့်တယ်။
ယခုငါတို့« Edit »ကိုနှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့« Open in »ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ဆုံး၌ WhatsApp ကိုရွေးပြီးကျွန်ုပ်တို့ပို့လိုသောအဆက်အသွယ်ကိုနှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် VLC သီချင်းသို့မဟုတ်အခြားမာလ်တီမီဒီယာ application တွင်သီချင်းရှိပါကသင့်အားပေးနိုင်ပါသည် WhatsApp ကိုဝေမျှ။ တိုက်ရိုက်ရွေးရန်တိုက်ရိုက်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ iPhone မှာရှိတဲ့သူတို့ကိုပေးပို့ရတာပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပုံရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သီချင်းရှိသည့်မာလ်တီမီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းသည်ရှယ်ယာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုရှိပါက (
) သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ WhatsApp မှပေးပို့ရန်ခွင့်မပြုပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည် ဒီနည်းကိုအလုပ်ဖော်။ ၎င်းသည်အလွယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Mac Preview ကဲ့သို့သောစာရွက်စာတမ်းအမျိုးမျိုးအတွက်ကြည့်ရှုသူနှင့်တူသော်လည်း၎င်းမှကျွန်ုပ်တို့အား WhatsApp မှသီချင်းများပေးပို့နိုင်မည့်အစွမ်းထက်မျှဝေခြင်း option ရှိသည်။
WhatsApp မှရရှိသောသီချင်းများကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း
WhatsApp တွင်သီချင်းများကိုကြည့်ခြင်း၏အားနည်းချက်မှာ၎င်းတို့ကိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ မရပါ။ မဟုတ်ဘူး။ အနည်းငယ်မ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီမည့်လှည့်ကွက်တစ်ခုရှိသည် WhatsApp ကိုအသံသိမ်းဆည်းပါ။ အောက်ပါနည်းလမ်းသည်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမဟုတ်ပါ။ နောင်အနာဂတ်တွင်ဤလမ်းကိုရှောင်ရှားရန်မလိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ပါမည်။
WhatsApp မှရရှိသောသီချင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆော့ကစားသည်။ ကျနော်တို့ "Resend" option ကိုပေါ်လာကြောင်းမြင်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်« Resend »ကိုနှိပ်ပါ။
ပေါ်လာသောရွေးချယ်မှုများမှကျွန်ုပ်တို့သည်“ မှတ်စုများထဲသို့ထည့်ပါ” ကိုရွေးချယ်သည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့မှတ်စုများကိုဖွင့ ်၍ ဖန်တီးထားသောမှတ်စုကိုရယူပါမည်
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သီချင်းကိုသဟဇာတဖြစ်သော application တစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ငါ VLC ထဲမှာသိမ်းလိမ့်မယ်။
သူတို့ကမှတ်ချက်များတွင်ပြောထားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဇာတိနှင့်အခမဲ့ option ကိုဤနေရာတွင်ထည့်လိုသည်။ သင့်တွင် Workflow ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Preview Workflow (Quick Look) ကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ အခြားလုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုလည်းစတင်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာစားသုံးသူ၏အရသာနှင့်ဖြစ်သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း၎င်းသည်အဆင့်အနည်းငယ်သာရှိသောနည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်သံသယဖြစ်စေပြီးအလုပ်လုပ်သည် iPhone တွင် WhatsApp အသံထွက်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်သိမ်းထားသနည်း။ မကောင်းတာကသီချင်းကိုပို့လိုက်တာပဲ အလွန်ရှည်လျားသောအမည်နှင့်အတူသိမ်းဆည်းပါသို့သော် VLC ကဲ့သို့ application များသည်သင့်အားဖိုင်အမည်ပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ WhatsApp မှသီချင်းများပေးပို့ခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းရန်အတွက်ဤနည်းလမ်းများကိုသင်မည်သို့ထင်သနည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » သီချင်းတွေကိုဘယ်လိုပို့မလဲ (သို့) လက်ခံရရှိသူတွေကို WhatsApp ကနေသိမ်းဆည်းမလဲ
Juan Fran (@ Juan_Fran_88) ဟုသူကပြောသည်
Juan Fran (@ Juan_Fran_88) ကိုစာပြန်သည်
စိတ်ဝင်စားစရာ ... အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသော်လည်းအခမဲ့လား။
မင်္ဂလာပါအမည်မသိ မင်းသူတို့ကိုပို့ချင်လား ငါဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, အရေးကြီးသောအရာမျှဝေ၏တိုးချဲ့သောလျှောက်လွှာတွင်သူတို့ကိုရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Share ခလုတ်မှ VLC မှသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုသင်ပို့နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ reel မှသူများကိုပို့လိုပါကဂီတစာကြည့်တိုက်သို့ဝင်ရောက်နိုင်သော iZip (၎င်းတွင်အခမဲ့ဗားရှင်းရှိ) ကိုသင်စမ်းကြည့်နိုင်သည်။ ငါကစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
Edit: မဟုတ်ပါ၊ iZip သည် Pro version နှင့်မကိုက်ညီပါကအလုပ်မလုပ်ပါ။ စာကြည့်တိုက်ရှိသီချင်းများကိုကြည့်ရှုနိုင်သောအခြားအပလီကေးရှင်းတစ်ခုခုကိုကျွန်ုပ်ရှာပါလိမ့်မည်။
Edit 2: စာရွက်စာတမ်းများ5ကခွင့်ပြုပါတယ်။ ငါပို့စ်ထဲမှာထည့်ပါ။
ယေရှု jaime gamez ဟုသူကပြောသည်
download လုပ်ထားသောသီချင်းများသိမ်းဆည်းရန်အတွက် memory player နှင့်အတူ browser တစ်ခုအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်သည့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းကို iPhone 5s အဆုံးတွင် idownloader ဟုခေါ်သည်၊ အလွန်ကြိုးစားသည်။
Jesus jaime gamez အားပြန်ပြောပါ
သင်လုပ်ထားသော run worflow ကိုမှတ်စုများပေးမည့်အစား workflow ဖြင့် dropbox ကိုပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်ပြီး၊ သင်စာရွက်ရှိပါကသင် download လုပ်လိုသည့်နေရာတွင်ဒေါင်းလုဒ် လုပ်၍ သိမ်းနိုင်သည်
တစ်ခုခု၊ သင်လိုချင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ သိမ်းရန်ဒီစာရွက်ရှိသလား။
ဟိုင်းမာကို။ သင့်မှာ Workflow application ရှိရင် Preview မှာ link တစ်ခုထည့်ထားပြီ။ ၎င်းသည် share ခလုတ်မှစတင်သော extension တစ်ခုဖြစ်သည်။ WhatsApp မှမျှဝေရန်၎င်းကို Run Workflow ကိုရွေးချယ်ပြီး Preview ကိုရွေးချယ်ပါက၎င်းဖိုင်ကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်စိတ်ဝင်စားမှုမှာ share ခလုတ်ကိုထပ်နှိပ်လျှင်သင်လိုချင်သမျှကိုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းကို VLC တွင် Dropbox တွင်သိမ်းဆည်းခြင်းကဲ့သို့ ...
မင်းရဲ့ post ကိုငါချစ်တယ်လို့ငါပြောချင်တယ်။ တိကျမှန်ကန်သောစိတ်ရင်းမှန်နှင့်အသုံးဝင်သော Workflow သည်ကျွန်ုပ်၏ iPhone 8s (iOS4နှင့်ရုန်းကန်နေရဆဲ) နှင့်အတူ iOS 9.3 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပေးသော app ဖြစ်သည်။ သူကဤနှစ်ခုစီးနှင့်အတူကဲ့သို့အထဲကကြိုတင်ကြည့်ရှုအဖြစ်အများကြီးမရခဲ့ပေ။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
Pablo Mathematician ကိုပြန်ပို့ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ iPhone ဂီတစာကြည့်တိုက်ကို Documents5မှတဆင့် ၀ င်သောအခါ၊ တည်းဖြတ်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းမရပါ။ (ငါ့မှာ iphone 5s ရှိတယ်)
Love, Album Box နှင့်အခြားအရာများသည်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအခမဲ့ဖြစ်သည်